အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အပျိုဂျီးများကူညီစောင့်ရှောင့်ရေးအသင်းကြီး ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အပျိုဂျီးများကူညီစောင့်ရှောင့်ရေးအသင်းကြီး ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အပျိုဂျီးများကူညီစောင့်ရှောင့်ရေးအသင်းကြီး ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်း
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Feb 9, 2011 in News | 28 comments
သူကလေးက ဟုတ်ပါဘူး သူကြီး (ရွာသဂျီးမဟုတ်ပါ အသက်ငယ်ငယ် ချာတိတ်မလေးမဟုတ်တော့ သူမဂျီး) က မိန်းမသားဆိုတော့ အားငယ်ရှာပေမပေါ့
ကိုအောင်ပုကို အရမ်းအရမ်း (ဂလု ဂလု )
ဘာညာ ဘာညာဆိုပြီး ပြောခွင့်ကလည်းမရှိရှာလေတော့ ( ဖွဟဲ့ အပျိုဂျီးနဲ့ ငါ လွဲပါစေဖယ်ပါစေ )
မျိုသိပ်ထားရတဲ့ အချစ်တွေကို အတွင်းအားနဲ့ 
ငါ့နဲ့ နော် ညံ့ပါ့
အသက်က သုံးဆယ်ကျာ်ပြီ နေရာကမကျသေးဘူး
မသကာ ခပ်ပိန်ပိန်ညောင်ညောင်လေးတစ်ယောက်လောက်ရရင်တောင် တော်သေး
ငါ့ကို ရှိတယ်လို့ တောင်မအောင့်မေ့
ဇလုံနဲ့ ကို ဖမ်းအုပ်ထားမယ်
အဲ့သည်လိုများ တွေးတောနေကြပါသလား အပျိုဂျိုးတို့ ဟုတ်ပါဘူး ယောင်လို့ 
အချစ်ရေးထက် ဝါးတီးပေးဘို့ ကခက်ပါတယ်
ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ ခံစားနားလည်ပေးတဲ့အလျှောက်
ကူညီ စောင့်ရှောင့်ချင်တဲ့စေတနာဗလပွ ဖြစ်ပေါ်လာရပါပြီး
ပဏာမ အနေနဲ့ 
အပျိုဂျီးများရဲ့ အနာဂတ်စားဝတ်နေရေး ပူပန်နေရမှုကို
တစ်စိတ်တစ်ဒေသ လျှော့ချတဲ့အနေနဲ့ 
အပျိုဂျီးများအားလုံးကို နည်းပညာတွေဖြန့် ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
အုန်းပင် ( ၈ ) ပင်စီစိုက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
အုန်းရှစ်ပင်လင်တစ်ယောက်လို့ရှေးအပျိုဂျီးများရဲ့ ဗေဒ ကျမ်းများကို
မွှေနှောက် ရှာဖွေပြီးတော့ ထုတ်ဖော်ပေးတာပါ
ကွယ်ပျောက်နေတဲ့ အပျိုကြီး အဘိဓာန်များမှ နည်းပညာများကို ကြိုးစားရှာဖွေဖော်ထုပ်ပေးပါဦးမည်။
ဒါကြောင့် အားမငယ်ဂျပါနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အလိုမကျတာလေးတွေများရှိခဲ့ရင်ဖြင့်
ကြောက်စရာ့ အပျိုဂျီးတွေပါလား. အရပ်ကတို့ရေ. ကယ်ကြပါဦးဗျာ….။
ကြောက်တယ် . အိပ်တော့မယ်…။
မြန်မြန်တွေ့ပါစေတော်………. အညင်ကတ်ဒဲ့ပုဒ်မနဲ့ ရှုတောင်းပေးလိုက်တာ
အောင်မြလေး … ၀က်သားစားချင်စိတ် ကုန်သွားတယ် ..
အုန်းပင်က အဖိုလားအမလား ပြောအုံးလေ ကိုအောင်ပုရဲ့။
စောင့်ရှောက်ချင်စရာလေးတွေပါလား ။ ကိုကြောင်ကြီး အကြိုက်ပဲပေ့ါ
အပျိုကြီး အပျိုကြီး.. ဘ၀ တွေများ စိတ်ပျက်တယ် လောကီလူ့ဘုံ စိတ်ကုန်လို့ တော ထွက် မလို့ဘဲ ကားလက်မှတ် ၀ယ်ပေးမဲ့ သူမျှော်နေတာ.. ဘယ်သူများ ချစ်သက် လက်ချောင် ၀ယ်ပေးမလဲလို့.. ချောကလက်လေး ၀က်ဝံလေးတော့ မျှော်လင့်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ် မဟုတ်လား။ နော်နော်.. နော်… နော်လို့.. အဟိ… အဟင့် အဟတ်။ (၀ါးနေတဲ့ သကြားလုံး လည်ပင်းတစ်သွားလို့)
ကဲ … (…) ကြားတရ်နော် …
စိုက်လိုက်တော့ အုန်း ၈ ပင် …
စေတနာနဲ. သိပါစေလို. forward ပေးတဲ့ mail တွေကို ခွင့်မတောင်းပဲ post တွေ ခပ်တည်တည်နဲ. သူ.ဟာလို တင်နေတော့ … ဦးလေးနဲ.မိတ်ဆက်ပေးဖို. အစီစဉ်ဖျက်လိုက်တော့မရ် .. ဟွန်း။
ဆူးရေ မမ ၀ယ်ပေးမယ် မပူနဲ့သိလား။ တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့လည်း ဘာမှအားငယ်စရာမလို၊ တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးဘ၀က အေးချမ်းနေတာ မိုက်ကယ်တို့များ မနာလိုဘူးထင်တယ်နော်။ နောက်မှ ဂိုဏ်းချုပ်က လူပြိုသိုးကြီးဖြစ်သွားရတော့ ၀ဋ်လည်ပြီလို့ တွေးပြီး နောင်တရမနေနဲ့နော် ကြားလား…
မိန်းကလေးများ အပျိုကြီးဖြစ်ရခြင်းသည် လောကတွင် ယောက်ျားကောင်းများ မရှိသေးလို့ ဖြစ်ပြီး ယောက်ျားလေးတွေ လူပျိုကြီးဖြစ်ရခြင်းသည် လောကတွင် မိန်းကလေးတွေ ပြန်မချစ်လို့ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ချက်အရ သိရပါတယ်ရှင်။
မနောကို ဘဲ အားကိုးရတော့မှာဘဲ အုန်း၈ပင် အမြန်ဝယ်နော်။ ရွာထိပ်မှာ စိုက်ချင်လို့ တခါတည်းသာ စိုက်လိုက်ပါ။ ရန်သူတွေ မလာနိုင်အောင် အုန်း၈ပင်နဲ့ ကာထားမလို့ ခြံစည်းရိုးသဘောမျိုးပေါ့။ အမ စိုက်ပြီးရင် ပြောနော်။ ဆူး ရွာနောက်ပေါက်က ထွက်ပြီး ပြန်လာခဲ့မယ်။
အင်း တို့ညီအစ်မတွေ ဆီအုန်းပင်စိုက်လိုက်ရင် စီးပွားရေးလုပ်စားလို့ရတယ်လေ။ ဒါဆို ယုဇန ဦးဌေးမြင့်က သူ့နဲ့စီးပွားပြိုင်ဘက်ဆိုပြီး ရန်စောင်မလားမသိ အဟိ…..:P
ဘာလဲ cobra အုန်း ၁၆ ပင်စိုက်မလို့မေးနေတာလား သေချာရှင်းပြလိုက်နော်………
သီးတဲ့အသီးတွေကို စွတ်ခူးရောင်းချအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတာကို ခေါ်သကွဲ့ 
ဒါပေမယ့် ဗေဒ ကျမ်းဂန်မှာပြထားတာက ဝက်မလွတ်လားဘာလားတော့ တိဝူး
အစဉ်ပြေတဲ့ အုန်းပင်ကို စိုက်ရပေမပေါ့
မောင်က အပျိုကြီးမဟုတ်ဘာမဟုတ် ဘယ်လိုဖစ်တာဒုန်း
အုန်းပင်ခုတ်ခနဲ့ မြူနီစပါယ်ခပါ ထပ်စောင်းပေးနေရပါဦးမယ်
အုန်းပင်စိုက်မယ်ဆိုရင် ရိုးရိုး အုန်းပင် မစိုက်နဲ့ ဆီအုန်းစိုက်၊ ဒါမှ ၀င်ငွေပါရလာမှာ… ဆီအုန်းတွေစိုက်ဖို့ ခြံဝယ်ထားတယ်… စိုက်ချင်တဲ့ လူများ စာရင်းပေးပါ…
( တို့ညီအစ်မတွေ ဆီအုန်းပင်စိုက်လိုက်ရင် စီးပွားရေးလုပ်စားလို့ရတယ်)
အင်းစီးပွားဖြစ်စိုက်မယ်ဆိုတော့ တစ်ယောက်ကို ဘယ်နှစ်ပင်များစိုက်မယ်စိတ်ကူးထားတယ်မသိဘူးနော်။
အုန်း၈ပင် = အုန်းရှစ်ပင်
သေချာတော့ မသိဘူး။ နောက်တချိန် ယောကျား အစစ် ရှားရင် (အခြောက်တွေများရင်) အမျိုးသမီးတွေ ရင်ထုပြီး လင်လုရမယ်။ သတိုးသား အမေတွေ ဆန်တအိတ်နဲ့ တောင်ထိပ် တက်နေရမယ်။ သတိုးသမီးတွေ လာလာ တောင်းလွန်းလို့..
အုန်းရှစ် တတင်း ဘာတတင်း ဆိုလဲ မသိဘူး နဲ့ ညီမယ် လိုလား.. ကျား နဲ့ မ အရေ အတွက်က.. အဲဒါကြောင့် အုန်းရှစ်ပင် လို့ ပြောတာ။ အုန်းရှစ်သီးက ကြီးတဲ့ အတွက် ၁တင်း ဆိုတာ အရေ အတွက် နည်းနည်းနဲ့ ဖြစ် နိုင်ပေမဲ့ ဥပမာ ဆန် ၁တင်း ဆိုရင် ဆန်စိတွေ အများကြီး ရှိရမယ် အဲဒီလို နည်းမျိုးနဲ့ ရှားမယ် လို့ ပြောချင်တာ။
လေးပေါက် ပြောတာ အမှန်ပါဘဲ။
အဘပုပြောလိုက်တာသိသာတယ်လို့ထင်ရဒယ် ဒါပေသိ….. မသိကြဘူးဗျ
အဘပုပြောလိုက်တာ သိသာတယ်လို့ထင်ရဒယ် ဒါပေသိ….. မသိကြဘူးဗျ
မင်းစကားထစ်တတ်တရ်နဲ.တူတရ် .. နှစ်ခါတောင်မန်းထားတရ်ဆိုတော့
ဟေ့ကောင် .. သယ်ရင်း
တော်ကြာပို.စ်တင်ပီးဆဲတဲ့အထဲ မင်းရောပါနေအုံးမရ်နော … အဟတ်အဟတ် …
အပျိုကြီးတွေ အုန်းပင်စိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ … ဘယ်လို အသီးတက်ခူးမလဲ… ။ အသီးခူးတာ ယောကျာ်းသားတွေပဲလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်… တော်ကြာ တစ်ပင်ပြီး တစ်ပင်တပ်ခူးရင်း … ရှစ်ပင်လည်း မြောက်ရော… ယောကျာ်းလည်း ရရောဖြစ်နေမယ်… ။ ( အပင် အောက်မှာ ရူးရူးလာပေါက်တဲ့ ကိုယ်လူပျို အပင်ပေါ် မော့ကြည့်မိလို့ … )
ဥသျှစ်ပင်စိုက်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးလား ။ ဥသျှစ်သီးက………….
အောင်ပုတို့ က တောမှာနေတာဆိုတော့
မြို့ မှာလို တွိုင်းလက် တို့ ဘာတို့ ရှိတာဟုတ်ဘူး
စစ်ဒေါင်း ငုတ်တုတ် ဂဇင်းရိုးမှာ
တစ်ခါတစ်လေ ကြတော့ တပည့်တွေဘာတွေပါတာပေါ့
ကိုယ်ကအရှေ့ ကို အာရုံစိုက်ပြီး အီးညှစ်နေတုန်းမှာ
အနောက်က တပည့်က အတင်းဝင်စားတော့
ကမန်းကတန်း ရှေ့ တိုးပေးရတယ်
ကိစ္စပြီးလို့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ
ဥသျှစ် သီးလေးများ စားပြီး အီးပါလိုက်ရင်
အီးဆိုတာ ဝါထိမ်ပြီးတော့ ဘာလှသလဲမမေးနဲ့ 
ဟိုတစ်မျိုးကိုတော့ သွားမလုပ်နဲ့ ဗျို့ 
စားပြီး အီးပါလို့ 
ကိုယ့်အီးပုံပါလို့ ပြောရမှာတောင် ရှက်တယ်
ကဲကဲ၊ အီးသုတေသန အဖွဲ့ဖွဲ့မယ်၊ ကိုအောင်ပုကို ဥက္ကဋ္ဌ ခန့်မယ်၊ ကျန်တဲ့လူတွေရော? ပါဝင်ချင်တဲ့လူတွေ စာရင်းပေးပါ…
ကို ကူညီဖေးမနိုင်မှာပေါ့ သူတို့လည်း ဒီလို ပုံပျက်ပန်းပျက်ဝနေတာမျိုးကိုဘယ်လိုချင်ပါ့မလဲနော်
ဖြစ်နိုင်ရင် model လေးတွေလို လှပ ကြွရွနေချင်မှာပေါ့ ဒါပေမဲ့ဘ၀ပေးကုသိုလ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လေ ဒါကြောင့်အားငယ်နေတဲ့သူတွေကို အားပေးဖေးမဘို့စိတ်ဓါတ်ကလေးတွေတော့လူတိုင်းမှာရှိဖို့လိုမယ်နော